ट्रम्पद्वारा ट्वीटरलाई नोभेम्वर २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप – Online Annapurna
ट्रम्पद्वारा ट्वीटरलाई नोभेम्वर २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०५:०९ May 27, 2020 49 Views
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो पटक ट्वीटर पोष्टको एक तथ्यांक परिक्षण लेवल दिईएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गरे :“त्यहाँ कुनै तरीका छैन, (शून्य) कि मेल–ईन मतपत्रहरु ठग्ने जालसाजी भन्दा कम केहि हुनेछन् ।”
ट्वीटरले पोष्टको मुनि एक चेतावनि लेबल राख्यो र त्यसको पछिल्लो ट्वीट भ्रमपूर्ण जानकारीमा यसको नयाँ नीति अन्र्तगत ।
ट्रम्पले फेरि ट्वीट गरेर जवाफ दिए, “सोशल मिडिया विशाल” पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र बोलीलाई दबाउँदैछ ।”
ट्वीटरको अधि सूचनाले ट्वीट्सको मुनि एक निलो उद्गार चिन्ह देखाउने गर्दछ, पाठकहरुलाई “मेल–ईन मतपत्रहरुको बारे तथ्यहरु प्राप्त गर्नुहोस्” भन्ने सल्लाह दिँदै ।
कोरोनाभाइरस :ट्वीटरले कोभिड १९ को नक्कली समाचार लेबल गर्नेछ कि ट्रम्पको पोष्टको बारेमा के भनिरहेको छ ?
ट्वीटरको लिंकले प्रयोगकर्ताहरुलाई एउटा पृष्ठमा निर्देशित गर्दछ, जहाँ ट्रम्पका मेल–ईन मतपत्रहरुका बारेका दाविहरु “असम्बन्धित” भनेर व्याखा गरेको छ । सामाजिका मिडिया कम्पनीले सिएनएन, वाशिंटन पोष्ट र अन्यले यो मुद्धालाई रिपोर्ट गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यसपछि “तपाँईले के जान्नु पर्छ” खण्ड अनुगमन गरिएको छ जहाँ ट्वीटरले यसलाई सुधार गरेको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपतिले झुटो दावि गरेका छन् ।
सोशल मिडिया कम्पनीले यस साइटमा गलत वा भ्रामक जानकारी अन्तर्गत चेतावनिका लेबलहरु बढाउने वाचा गरेको थियो तर अमेरिकी राष्ट्रपति विरुद्ध कदम चाल्न ढिलो भएको छ । ट्वीटरले यस महिनाको सुरुमा चेतावनि लेबलहरुमा आफ्ना नीतिहरु अपडेट गरीसकेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ त ?
आफ्ना नयाँ ट्वीटमा ट्रम्पले ट्वीटरलाई नोभेम्वर २०२० मा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले भने, सोशल मिडिया कम्पनीले “स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई पूर्ण रुपमा दिक्क बनाईरहेको छ, र राष्ट्रपतिको रुपमा म यसलाई हुन दिनेछैन ।”
ट्रम्पको राष्ट्रपति अभियानका प्रवन्धक ब्रेण्ड पार्सलले पनि ट्वीटरको आलोचना गरेका छन् । पक्षपातपूर्ण नक्कली सामाचार “तथ्य परिक्षणकर्ताहरुसंग साझेदारी गर्नु भनेको ट्वीटरको स्पष्ट राजनीतिक रणनीतिहरु झुटो विश्वसनियता उधारो दिनकोलागि धुँवाको पर्दा हो । हामीले महिनौं अघि ट्वीटरबाट हाम्रा सबै विज्ञापनहरु खिचेका धेरै कारणहरु छन् र स्पष्ट राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि ति मध्य एउटा हो, पार्सलले ट्वीट गरे ।श्रोत :बीबीसी डट कम/टेक्नोलोजि